၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၌ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၅၅၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁? - Yangon Media Group
ကျောက်တံခါး၊ ဇန်နဝါရီင်္ ၂ – ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုပေါင်း ၅၅၅ ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၁၁၆ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ် ဖွဲ့မှတ်တမ်းများအရ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုပေါင်း ၅၅၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်များ ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ၊ လမ်း အသုံးပြုသူ ၁၁၆ ဦး သေဆုံး ခဲ့ကာ ၈၆၃ ဦးမှာ ထိခိုက်ဒဏ် ရာများရရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူ တစ်နှစ်တာအတွင်း အောက်တို ဘာလအတွင်း၌ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၃၃ မှုအထိရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအ တွင်း၌လည်း ယာဉ်မတော်တ ဆမှု ၇၄၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားကာ သေဆုံးသူ ၁၇ဝ ဦး အထိရှိခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၃ဝ၄ ဦးရှိခဲ့သည်။
အမြန်လမ်းမကြီးယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်များတွင် ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်မှု၊ ယာဉ်ချို့ယွင်းမှု၊ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်မှု၊ စည်းကမ်းမဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးမှု၊ လမ်းမကြီး၏လမ်းဘေးဝဲယာတွင် တိရစ္ဆာန်များအား စည်းကမ်းမဲ့လွှတ် ကျောင်းမှု၊ ဆိုင်ကယ်များတက် ရောက်မောင်းနှင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်တိုက်မှုများလျော့ နည်းစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှလည်း ယာဉ်မောင်းများအား ပညာပေးဟောပြောစည်းရုံးခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေ ခြင်း၊ စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ်များအား ရုံးတင်တရားစွဲဆိုခြင်း၊ ယာဉ် အမျိုးအစားအလိုက် မိုင်နှုန်း များသတ်မှတ်ခြင်း၊ လမ်းမကြီး ဘေးတစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများ သို့ကွင်းဆင်းကာ ပညာပေး ဟောပြောခြင်းများအား စဉ် ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
တရားရုံးတွင် သက်သေခံပစ္စည်း ပြန်ထုတ်ရာ၌ လာဘ်ပေးမှ ပြန်ထုတ်လို့ရဟု ကြားသိနေရကြောင်း လွှတ်တေ??